ओहो ! डायलासिस गराउन ठेलामा हालेर अस्पताल – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/ओहो ! डायलासिस गराउन ठेलामा हालेर अस्पताल
११ जेठ, काठमाडौं । आइतबार दिउँसो काठमाडौं उपत्यकाका टन्टलापुर घाम लागेको थियो । लकडाउनका कारण पास भएका तथा अत्यावश्यक सवारी साधान मात्र गुडिरहेका थिए । सडकमा आवत जावत पनि शून्यजस्तै थियो ।
जवाफ आयो : डायलासिस गराउन वीर अस्पताल ।उनी अस्पताल नजिक पुगिसकेका थिए । त्यसैले हामीसँग एम्बुलेन्स बोलाउने समय पनि थिएन । तर, उनलाई पछ्यायौं । उनी वीर अस्पताल पुगेर महिलालाई डायलासिसका लागि पठाएपछि उनसँग हामीले बिरामी को हुन् ? के भएको हो ? किन ठेलामा हालेर अस्पताल ल्याउनुपर्‍यो ? भनेर जान्न चाह्यौं ।
टेण्टमा बस्ने महिला मजदुरलाई प्रहरीले अ’नैति’क काम गर्दागर्दाै महिलाकै श्रीमानले रं’गे’हात देखे (भिडियो हेर्नुस्)